Hawaii COVID enweghị nchịkwa & zute ya na njem nlegharị anya na ịgbachi nkịtị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii COVID enweghị nchịkwa & zute ya na njem nlegharị anya na ịgbachi nkịtị
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Kwụsị ndị ụgbọ elu ịmalite ụgbọ elu ọhụrụ na Hawaii
Njem nlegharị anya Hawaii nwere nsogbu ahụike ọ nweghị onye chọrọ ikwurita. Ndị ọbịa na-abata na ndekọ ndekọ ego na-eweta steeti dị oke mkpa, yabụ na ọ dị ka nsogbu ahụike a adịghị agbanwe ihe. Nabata na -arịa ọrịa Aloha Steeti. Ka anyị nwee olile anya na a gbara ndị ọbịa niile ọgwụ mgbochi. Ndị njem na Hawaii, jigide ma jikere maka njem njem ahụike nke ndụ gị niile.
Gọvanọ Hawaii Ige jụrụ ịzaghachi eTurboNews na Akụkọ Hawaii.
Onye isi obodo Honolulu Rick Blangiardi dị jụụ, na -ekewapụ onwe ya na ajụjụ na -adịghị mma eTurboNews.
Onye isi ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii John De Fries na onye isi ụlọ ọrụ Hawaii Lodging na Tourism Association Mufi Hannemann na-ezere ajụjụ kemgbe COVID-19 ghọrọ okwu maka ụlọ ọrụ ndị ọbịa Hawaii.
COVID-19 enweghị nchịkwa na Hawaii, mana njem na-aga n'ihu. Ndị isi njem nlegharị anya enweghị ihe ha ga -agwa ndị ọbịa. Ndị ọbịa dị otú ahụ kwesịrị inwekwu nchegbu kwa ụbọchị. Ndị a hoputara ka ha duzie ya na -agbachi nkịtị.
Ịgbachi nkịtị bụ nzaghachi ịchekwa ihu amaara na ọdịbendị Eshia, nke pụtara na azụmahịa PR dị ka ọ dị na Hawaii.
Ụbọchị isii gara aga, akwụkwọ a gosiputara ọnụ ọgụgụ ndekọ ndekọ ndekọ COVID-19 na Hawaii. Nọmba a bụ mmụba nke abụọ kachasị elu, ndekọ ọhụrụ taa pụtara mmeri ọzọ maka nje a.
N'iburu n'uche 53.7% nke ndị bi na Hawaii na -agba ọgwụ mgbochi ugbu a, na 71.7% natara opekata mpe otu Pfizer ma ọ bụ Moderna, ọrịa ọhụrụ ahụ na -eyi egwu karịa ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile so na 46.3% ndị na -agbabeghị ọgwụ mgbochi. Ọbụlagodi n'oge ọrịa kacha njọ, a hụghị ọnụọgụ ndị a na steeti.
Ọbụlagodi mgbe njem na akụ na ụba kwụsịrị tupu Ọktoba 15 afọ gara aga, ọnụọgụ ọrịa dị otú ahụ adịghịdị nso na ihe Hawaii na -enwe ugbu a.
Otu nwere ike na -arụ ụka naanị ikpe 8 nwere ike jikọta njem ụnyaahụ, mana ihe anaghị agwa ya bụ na naanị ikpe 61 nwere ike jikọta ya na ntiwapụ nke obodo, mana ọtụtụ narị ikpe ndị ọzọ, na -eme ọtụtụ ikpe niile bụ nke amaghị ihe kpatara ya.
Dị ka ọ nọ kemgbe nsogbu ahụ, Ndị njem nleta Hawaii gbachiri nkịtị, ugbu a gbachiri nkịtị a bụ nke Gọvanọ Ige, ndị isi obodo, na onye ọ bụla ọzọ na -achị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 30,000 na -abata na Hawaii kwa ụbọchị, ụlọ oriri na ọ mepere emepe mepere emepe, ihe mkpuchi na ịdị na -elekọta mmadụ yiri ka ọ dịchaghị mkpa.
N'ụzọ na -emegide onwe ya, mmadụ nwere ike ịsị na akụ na ụba butere ụzọ maka ahụike, mana ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na -arụsi ọrụ ike ịchọta ụzọ iji kụda ndị njem nlegharị anya.
Ihe kpatara nke ahụ abụghị COVID-19 kama ọ bụ ichebe okwu ọdịbendị na mgbanwe ihu igwe.
Nkwupụta ikpe COVID-19 kachasị ọhụrụ sitere na gọọmentị nke Aloha Steeti, 655 ọhụrụ Hawaii COVID-19 na-ebute mkpokọta 44,617 (ihe ruru 1.4% site na ụbọchị gara aga). Nke a bụ ọnụọgụ ikpe kacha elu edere n'ime otu ụbọchị.
Dị ka Lt. Gov. Josh Green si kwuo, mmụba a bụ n'ihi Delta Variant. N'ihi nsonaazụ a, ụlọ ọgwụ na -abawanye, ebe taa na -achọpụta 166 ka a na -agwọ n'ụlọ ọgwụ, ọnụego positivity nke 6.89%.
Ruo taa, ejirila 1,883,809 mee nnwale 19 COVID-42,439 na-ebute ọgụgụ dị mma ma na-aka akara ọnụego positi taa na 6.9%.
Ugbu a, nkezi ikpe kwa ụbọchị bụ 437.6. Enwere ngụkọta nke ikpe 4,391 a kọrọ n'ime ụbọchị 14 gara aga. Onu ogugu onwu rue ubochi a bu 538 (1.2%).
Mmebi nke okwu taa bụ:
Mpaghara Hawaii: 131
Mpaghara Maui: 69
Mpaghara Kauai: 7
Ka ọ dị ugbu a ụwa niile dị n'usoro. Oké osimiri, ụlọ oriri na ọ flightsụ flightsụ na ụgbọ elu juru. A naghị ahụkarị ndị ọbịa ka ha na -ekpuchi mkpuchi ma na -ekpori ndụ n'ụsọ osimiri, n'ụlọ nri, ọdọ mmiri, ụlọ oriri abalị na ebe nkiri.
Onye ọ bụla bi na mpaghara Waikiki na -anụ ụda ụgbọ ihe mberede ugbu a 24/7, akwa ụlọ ọgwụ na -ejupụta, mana n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọgwụ mgbochi, ọnụ ọgụgụ ọnwụ, ọ dabara nke ọma, ka dị obere.
A ga -enwe ihe mgbochi na pipeline? Eleghị anya, dịka ihe Gọvanọ Ige kwuru.
Reba ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 11, 2021 na 09:30
Mmadụ 131 nọ na Big Island nwere flu… anaghị adị m ka ihe mberede. Ọtụtụ ga -ahụ onwe ha nke ọma wee gaa n'ihu na ndụ ha dịka anyị niile kwesịrị. Achọghị imechi mkpọchi, nkpuchi ma ọ bụ ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya - anyị anọwo na ihe karịrị otu afọ ma ha anaghị arụ ọrụ.
review ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 6, 2021 na 17:44
Maybi juputara na mkpofu ị na -agbasa akụkọ na -ezighi ezi, m bi na Big Island wee tufuo mmadụ 4 ka covid gwa m ka ọ dị ma ọ bụrụ na ọ na -emetụta ndị mmadụ kwa ụbọchị n'ọkwa dị elu, onye iberibe na -eyighị ihe nkpuchi ya. iji nweta ọgwụ mgbochi na ọnụego a, anyị ga -emechi ọzọ ekele ndị nzuzu dị ka ị na -agbasa ozi na -ezighi ezi
Ọnwa Nke Asatọ 6, 2021 na 01:04
Nnukwu agwaetiti ahụ nwere mmụba nke abụọ kachasị ukwuu taa, mana ekwenyere m na ọ bụ oghere sara mbara- ọ bụghị dị ka Waikiki ma ọ bụ Oahu n'ozuzu ya.